Ọrụ Yiwu Agent
Yiwu bụ obodo azụmahịa azụmaahịa kachasị ukwuu n'ụwa niile. Ahịa Yiwu na-emepe kwa ụbọchị belụsọ CNY, ọ nwere aha ọma kwa ụbọchị Canton Fair. N'okpuru ebe a bụ mmeghe zuru ezu nke usoro ọrụ na ọrụ anyị, yana ahịa Yiwu, na-atụ anya na ị nwere ike ịnwe ụfọdụ echiche mgbe ị nyochachara.
Usoro Ọrụ na Ọrụ Anyị
Tọrọ ntọala na 1982, Yiwu Commodity Market bụ otu n'ime ọdụ mbupụ akụrụngwa kachasị ukwuu na China, nke nwere mpaghara azụmahịa azụmahịa 5.5 nde anọ, ihe karịrị 75 puku ụlọ ahịa anọghị n'ịntanetị 1.8 nke ụdị ngwa ahịa, ma na-adọta karịa 210 puku ndị ọbịa kwa ụbọchị. Akpọrọ ya dị ka "obere ngwongwo pere mpe kachasị n'ụwa n'ahịa" site n'aka United Nations, World Bank, Morgan Stanley na ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere ikike.
Ebuputara ahia ahia nke ngwaahịa Yiwu na mba na mpaghara 219. Kwa afọ, a na-ebupụ ihe karịrị 570 puku ngwa ngwa. Enwere ụlọ ọrụ na-anọchi anya 3,059 nke ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ, ọnụ ọgụgụ ndị ọchụnta ego si mba ọzọ gafere puku 13.
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), Mịnịstrị nke Mba Ofesi na ụlọ ọrụ ndị ọzọ eguzobela ozi ọmụma banyere ịzụ ahịa na Yiwu Commodity Market.
Kemgbe 2006, Mịnịstrị nke Azụmaahịa nke Ndị Republic of China ewepụtala ndepụta ahịa ngwaahịa Yiwu-China yana ọkọlọtọ ụlọ ọrụ nke "Commodities Classification and Code" n'usoro, nke pụtara na ahịa Ahịa nke Yiwu enwetala ikike mkpebi siri ike na ọnụ ahịa na ụkpụrụ na ngwaahịa ụwa niile. ahia.
Tọrọ ntọala na Ọktọba, 2001, Yiwu International Trade Mart District 1 ka etinyere n'ọrụ na 22 Ọktoba, 2002, nke bi na 420 Mu na mpaghara ụlọ nke 340,000 square mita na mkpokọta ego nke 700 nde yuan.
obụrede mbụre 460,000 m2 ụlọ ebe, n'elu 6000 ọkọlọtọ ụlọ ndò nke 14 m2 n'ihi na onye ọ bụla n'ala 1 ka 3, karịa 600 ụlọ ntu nke 80-100 m2 n'ala 4 na 5 na emeputa tinyekwa center emi odude na nke anọ n'ala.
International Trade Mart District 5 bụ isi ọrụ maka kọmitii Party nke Yiwu na gọọmentị Yiwu iji mejupụta echiche sayensị banyere mmepe, na ịkwanye mmepe nke Yiwu dị ka obodo ahia mba.
Emeghere na 22 October, 2004, International Trade Mart District 2 nwere mpaghara ahịa nke 483 Mu na mpaghara ụlọ karịrị 600,000 buildings, ma na-etu ọnụ karịa ụlọ ntu 8,000 ma na-achịkọta ndị ọrụ azụmaahịa 10,000.
Ejiri ya rụọ ọrụ na 21st October, 2008 Yiwu International Trade Mart District 4 bi na 1,080,000 m2 ụlọ ụlọ ma na-ejide ụlọ ndozi 16,000. Ọ bụ ọgbọ nke isii nke ahịa Yiwu na akụkọ mmepe ya.
Huangyuan uwe mkpuchi
Yiwu Huangyuan Garments Market dị na mpaghara na-ekwo ekwo na obodo Yiwu. Na-ekpuchi mkpokọta mpaghara nke 117 mu na ebe owuwu nke square mita 420,000.